ABagwebi 4 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
4 Baza oonyana bakaSirayeli baqalisa kwakhona ukwenza okubi emehlweni kaYehova akuba uEhudi efile.+ 2 Ngoko uYehova wabathengisa+ kwisandla sikaYabhin ukumkani wakwaKanan, owayelawula eHatsore;+ intloko yomkhosi wakhe yayinguSisera,+ yaye wayehlala eHarosheti+ yeentlanga. 3 Oonyana bakaSirayeli badanduluka kuYehova,+ ngenxa yokuba wayeneenqwelo zokulwa ezingamakhulu asithoba ezinamarhengqa amakhulu entsimbi,+ yaye yena wabacinezela ngobungqwabalala oonyana bakaSirayeli+ iminyaka engamashumi amabini. 4 Ngoko uDebhora, umprofetikazi,+ umfazi kaLapidoti, wayegweba uSirayeli ngelo xesha. 5 Wayehlala phantsi komthi wesundu kaDebhora phakathi kweRama+ neBheteli+ kummandla weentaba wakwaEfrayim; yaye oonyana bakaSirayeli babesiya kuye ukuze abagwebe. 6 Kwaye wathumela waza wabiza uBharaki+ unyana ka-Abhinowam eKedeshe-nafetali+ waza wathi kuye: “Akanikelanga myalelo na uYehova uTHIXO kaSirayeli? ‘Hamba uze uzithi saa kwiNtaba yaseTabhore,+ yaye thabatha amadoda angamawaka alishumi koonyana bakaNafetali+ nakoonyana bakaZebhulon.+ 7 Ngokuqinisekileyo ndiya kukutsalela+ uSisera+ intloko yomkhosi kaYabhin+ neenqwelo zakhe zokulwa nesihlwele sakhe kwintlambo yaseKishon,+ yaye eneneni ndiya kumnikela esandleni sakho.’”+ 8 UBharaki wathi kuye: “Ukuba uya kuhamba nam, ndiya kuhamba nam ngokuqinisekileyo; kodwa ukuba akuyi kuhamba nam, andiyi kuhamba.” 9 Waza wathi: “Ndiya kuhamba nawe. Ngokunjalo ke, udumo aluyi kuba lolwakho endleleni oyihambayo, kuba uYehova uya kumthengisa uSisera esandleni somfazi.”+ Ngoko uDebhora wasukuma waza wahamba noBharaki ukuya eKedeshe.+ 10 Kwaye uBharaki wabizela ndawonye uZebhulon+ noNafetali eKedeshe, kwaza kwenyuka amadoda angamawaka alishumi amlandela;+ noDebhora wenyuka naye. 11 UHebheri+ umKeni wayezahlule kumaKeni,+ koonyana bakaHobhabhi, uMoses awayengumkhwenyana wakhe,+ yaye wayemise intente yakhe kufuphi nomthi omkhulu waseTsananim, eseKedeshe. 12 Baza baxela kuSisera ukuba uBharaki unyana ka-Abhinowam+ unyukile waya kwiNtaba yaseTabhore.+ 13 Kwaoko uSisera wabizela ndawonye zonke iinqwelo zakhe zokulwa, iinqwelo zokulwa ezingamakhulu asithoba ezinamarhengqa amakhulu entsimbi,+ nabo bonke abantu ababekunye naye, ngaphandle kweHarosheti yeentlanga ukuya kwintlambo yaseKishon.+ 14 Ngoku uDebhora wathi kuBharaki: “Sukuma, kuba ngokuqinisekileyo le yimini uYehova aya kumnikela ngayo uSisera esandleni sakho. UYehova akaphumanga phambi kwakho na?”+ Yaye uBharaki wehla kwiNtaba yaseTabhore enamadoda angamawaka alishumi emva kwakhe. 15 Kwaye uYehova wavusa isiphithiphithi+ kuSisera nakuzo zonke iinqwelo zakhe zokulwa nakulo lonke iqela ngohlangothi lwekrele phambi koBharaki. Ekugqibeleni uSisera wehla enqwelweni waza wasaba ngeenyawo. 16 Yaye uBharaki wasukela emva+ kweenqwelo zokulwa+ nasemva kweqela ukuya kufikelela eHarosheti yeentlanga, kangangokuba lonke iqela likaSisera lawa ngohlangothi lwekrele. Akuzange kusale namnye.+ 17 Ke yena uSisera,+ wasaba ngeenyawo waya kwintente kaYaheli+ umfazi kaHebheri umKeni,+ kuba kwakukho uxolo phakathi kukaYabhin ukumkani waseHatsore+ nendlu kaHebheri umKeni. 18 Waza uYaheli waphuma waya kuhlangabeza uSisera waza wathi kuye: “Jika uze ngapha, nkosi yam, jika uze ngapha ngakum. Musa ukoyika.” Ngoko waphambuka waya kuye ententeni. Kamva wamgquma ngengubo. 19 Ekuhambeni kwexesha wathi kuye: “Nceda, undinike intwana yamanzi ndisele, kuba ndinxaniwe.” Ngako oko wavula intsuba+ yobisi waza wamnika ukuba asele,+ emva koko wamgquma. 20 Yaye wahlabela mgama wathi kuye: “Yima emnyangweni wentente, kuze kuthi ukuba nabani na uyeza aze akubuze athi, ‘Ikho na indoda apha?’ wandule uthi, ‘Hayi!’” 21 Yaye uYaheli umfazi kaHebheri wathabatha isikhonkwane sentente waza waphatha nesando ngesandla sakhe. Wandula ke waya kuye echwechwa waza wasibethelela isikhonkwane ezintlafunweni zakhe+ saza saphumela emhlabeni, ngoxa wayelele yoyi yaye ediniwe. Ngoko wafa.+ 22 Yaye, khangela! nanko uBharaki esukela uSisera. Ngoku uYaheli waphuma waya kumhlangabeza waza wathi kuye: “Yiza yaye ndiza kukubonisa le ndoda uyifunayo.” Ngoko wangena waya kuye, kwaye, khangela! nanko uSisera ewile efile, isikhonkwane sisezintlafunweni zakhe. 23 Ngaloo ndlela uThixo wamoyisa+ uYabhin ukumkani waseKanan phambi koonyana bakaSirayeli ngaloo mini. 24 Kwaye isandla soonyana bakaSirayeli saya sisiba nzima ngokuba nzima kuYabhin ukumkani waseKanan,+ de bamnqumla uYabhin ukumkani+ waseKanan.